Tantara: Tonga Amin’ny Maha Mpanjaka i Jesosy - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
FOTOANA fohy taorian’ny nanasitranany ireo mpangataka jamba roa lahy, i Jesosy dia tonga tao amin’ny tanàna kelin’i Betania. Hoy izy tamin’ny mpianany roa: ‘Mankanesa ao an-tanàna ary hahita zana-boriky iray ianareo. Vahao izy ary ento atỳ amiko.’
Rehefa nentina tany aminy ilay ampondra, dia nitaingenan’i Jesosy. Avy eo dia nankany Jerosalema tsy lavitra loatra avy eo izy. Rehefa nanakaiky ny tanàna izy, dia nisy vahoaka be tonga nanatona azy. Ny ankamaroan’izy ireo dia nanaisotra ny kapaotiny ary nametraka izany teny an-dalana. Ny hafa dia nanapaka rantsan’ny hazo roﬁa. Napetrany teo amin’ny lalana koa izany, ary niantsoantso izy hoe: ‘Tahin’Andriamanitra ny mpanjaka izay avy amin’ny anaran’i Jehovah!’
‘Eny, reko izany’, hoy ny navalin’i Jesosy. ‘Tsy mbola novakinareo ve izay voalazan’ny Baiboly manao hoe: “Avy amin’ny vavan’ny ankizy madinika no hitondran’Andriamanitra ﬁderana?”’ Koa dia nanohy nidera ny mpanjakan’Andriamanitra ireo ankizy.
Inona no tsy nampitovy ny ﬁdiran’i Jesosy Mpanjaka tany Jerosalema, sy ny an’ireo jeneraly nahazo fandresena, tamin’ny andron’ny Romanina? (Matio 21:4, 5; Zak. 9:9; Fil. 2:5-8; Kol. 2:15)